လိပ်စာကဒ်ပေးရင် သတိထား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Hoax » လိပ်စာကဒ်ပေးရင် သတိထား
Posted by july on Feb 3, 2011 in Hoax |6comments
အမျိုးသမီး တစ်ဦးက ဓာတ်ဆီဆိုင်မှာ ဓာတ်ဆီ ဖြည့်နေတုန်း သပ်သပ်ရပ်ရပ်
၀တ်စား ထားတဲ့ ယောက်ျား တစ်ဦးက သူ့ကိုယ် သူ ကုမ္ပဏီ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်
အဖြစ်နဲ့ သူမကို ရည်ရည်မွန်မွန် မိတ်ဆက်ရင်း ပစ္စည်း ၀ယ်ဖို့ လိုအပ် ရင်
ဆက်သွယ်ဖို့ လိပ်စာကဒ်ကို ပေးခဲ့တယ်။ သူမကလဲ သဘောရိုးနဲ့ လို့
ထင်မှတ်ပြီး ယဉ်ကျေးမှု အနေနဲ့ လိပ်စာကဒ်ကို လက်ခံပြီး ကားပေါ် ပြန်တက်လို့
မောင်းထွက် ခဲ့တယ်။ အဲဒီ အချိန်မှာပဲ အဲဒီ ယောက်ျားဟာ တခြား လူရည်သန့်
ယောက်ျား တစ်ဦး မောင်းတဲ့ ကားပေါ် တက်သွား ခဲ့တယ်။
ဓာတ်ဆီဆိုင်ထဲကနေ ကားမောင်း ထွက်လာတဲ့ သူမဟာ သူမရဲ့ ကားနောက်ကနေ စောစောက
ယောက်ျားက တချိန်တည်းမှာပဲ နောက်ယောင်ခံ ကားမောင်းလိုက်လာတာကို
နောက်ကြည့်မှန်က တဆင့် မြင်လိုက်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ သူမဟာ တအား
ခေါင်းကိုက်လာပြီး အသက်ရှူလို့ မရ ဖြစ်လာ ခဲ့တယ်။ သူမဟာ ကား
ပြတင်းပေါက်ကို ဖွင့်ဖို့ ကြိုးစားရင်းနဲ့ အနံ့ဟာ သူမရဲ့ လက်က လာတာ
ဖြစ်ကြောင်း သတိထားမိ လိုက်တယ်။ စောစောက ယောက်ျား လှမ်းပေးတဲ့ ကဒ်ကို
လက်ခံ ကိုင်မိတဲ့ လက်ဆီက လာတဲ့ အနံ့ပါ။
ရုတ်တရက် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပြန်ငဲ့ ကြည့်မိတဲ့အခါ ကဒ်ပေးတဲ့
ယောက်ျားရဲ့ကားက သူမကားရဲ့ နောက်တည့်တည့် ရောက်နေပါပြီ။ ဒါနဲ့ လူနဲ့ ကား
စည်ကားရာဆီကို သွားတဲ့ ကားလမ်းကြောကို အမြန်ဆုံး ရွေးမောင်းရင်း
ကားဟွန်းကို ထပ်ခါ တလဲလဲ နှိပ်နေခဲ့ရတယ်။ သူမရဲ့ ကားကို လူတွေ
သတိထားမိပြီး အကူအညီ ရလိုရငြားပေါ့။
အဲဒီတော့မှ သူမရဲ့ ကားနောက်က လိုက်နေတဲ့ ယောက်ျားတွေရဲ့ ကားက တခြားကို
မောင်းပြေး ပါတော့တယ်။ သူတို့ရန်က လွတ်ခဲ့ပေမယ့် သူမကတော့ မိနစ်တော်တော်
ကြာကြာ ခေါင်းမူး ခေါင်းကိုက် ဖြစ်ပြီးနောက် ကားပြတင်းပေါက်တွေက
တိုးဝင်လာတဲ့ လေတွေကြောင့် အသက် ပြန်ရှူနိုင် ခဲ့ပါတယ်။
လူတဖက်သား ဆီက တခုခု ခိုးယူဖို့ ဒါမှမဟုတ် အဲဒီလူဆီက တစုံတခု
အမြတ်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားရာမှာ သူတို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ သားကောင် သို့မဟုတ်
အနစ်နာ ခံရမယ့် သူက ဘာမှ ပြန်မတုံ့ပြန် နိုင် အောင် မသမာ သူတွေက
‘BURUNDANGA’ လို့ ခေါ်တဲ့ ဆေးကို သုံးတတ်ကြတယ်။ အဲဒီဆေး ဟာ
မုဒိမ်းကောင်တွေက မိန်းကလေးတွေကို မကျူးလွန်မီ မိန်းကလေးတွေ
ထွက်မပြေးနိုင်၊ မလှုပ်ရှား နိုင်အောင် ကျွေးလေ့ ရှိတဲ့ ဆေးထက် လေးဆ
ပိုပြင်းပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက ဒီဆေးက ပါးစပ်ထဲ ၀င်အောင် ခတ်စရာ မလိုပဲ
လိပ်စာကဒ်လို ရိုးရှင်းတဲ့ စာရွက် အပိုင်းအစ တစ်ခုက နေတောင် အနံ့
အဖြစ်နဲ့ ကူးလွယ်၊ အသုံးချရ လွယ်ကူ နေပါတယ်။
ဒီလို လုပ်ရပ်မျိုးထဲမှာ ကိုယ့်အိမ်တံခါး လာခေါက်ပြီး သတင်းစာ ဝေတာ၊
လက်ကမ်း ကြော်ငြာ စာရွက် ဝေပေးတာ၊ လူရှင်းပြီး ချောင်ကျတဲ့ စားသောက်ဆိုင်
တွေမှာ tissue box လာချတာက စလို့ ပုံစံ မျိုးစုံနဲ့ ချဉ်းကပ်
လာနိုင်တာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။
ကျေးဇူးပြုပြီး ဒီသတင်းကို သင် အလေးထား ဂရုစိုက်သူ တွေဆီကို လက်ဆင့်ကမ်း
ပေးပါ။ မသမာ သူတွေရဲ့ မာယာ ကျော့ကွင်း တွေကို အပြစ်မဲ့သူတွေ ရှောင်ရှား
မှတ်ချက် forward mail message မှပြန်လည်ဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်
View all posts by july →
I amacute girl. says:
အင်း ပေါ့လေ ဖက်ပေါ်ဆူးကျ လဲ ဆူးကျိုး၊ ဆူးပေါ် ဖက်ကျ လဲ ဆူးကျိုးနိုင်တာ ဆိုတော့ သတိထားရမှာပေါ့ (p.s. မဆူး နဲ့ ဦးဖက် ကိုပြောခြင်းမဟုတ်ပါ)
ပေါက်တတ်ကရ..ဇတ်လမ်းဆင်ထားတာဖြစ်ပါကြောင်းနဲ့..အောက်မှာ… မဟုတ်ကြောင်း သတင်းကိုပါပူးတွဲပေးလိုက်ပါကြောင်း..
The Woman and the Burundanga-Soaked Business Card
Published on September 19, 2008 by Carson Coots
Burundanga Card given to woman at gas station in Katy TexasA reader contacted me recently asking about an email she received describing an incident ataKaty Gas station whereawoman was givenadrug-soaked business card byastranger. According to the email, the woman took the card from the man (who was posing asapainter) and she was followed.
Apparently, this email has been circulating not only around the Katy area, but around the entire nation since early this summer. Here isacopy of the email (in one of it’s forms):
UPDATE: I followed the rabbit hole researching Burundanga, and ended up finding all kinds of scary stories about the drug. I found this video on VBS.TV (Spike Jonze is the creative director behind the site). Interesting:
ဒီဇက်လမ်းဟာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒီလိုဆေးမျိုး အခုချိန်ထိ ဘယ်သူမှမဖော်နိုင်သေးပါဘူး။ဆရာဝန်တွေကိုယ်တိုင်ကပြောထားပါတယ်။
အင်ပေါ့ မောင်လေးရယ် .. လို့ ..ဖြစ်နေတာမျုိုးလားကွယ်…
ဟုတ်တယ်ဗျာ အခုခေတ်က လုပ်ဇာတ်တွေကများသား ဟိုတလောကလည်း လူစဉ်စစ် ခွေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာက စတာထင်တာဘဲ သတိထားပေါ့ဗျာ